China yakasarudzika epurasitiki firimu rolls kudhinda kweAuto kurongedza fekitori uye vagadziri Hong Bang
Tsika Yakadhindwa Plastiki Firimu Rolls Kudhinda kweAuto kurongedza
HONGBANG yakagovera mhando yepamusoro tsika yakadhindwa mupumburu wepurasitiki zvigadzirwa kune vatengi muEurope neAmerica kweanopfuura makore makumi maviri. Iyo inopa akasiyana siyana akasiyana siyana eanodzivirira epurasitiki laminated firimu. Mazhinji ezvigadzirwa zvemufirimu anoshandiswa pakushambadzira chikafu uye mamwe ese anoenda kune akakosha maficha.
Isu tinopa mhinduro dzemusango renji yezvipingamupinyi zvemufirimu. Huwandu hwekugona kumisikidzwa kweyeyedu-yakaturikidzana firimu haina kukwana. Kunyangwe iwe uchida kurongedza kwechikafu chako chakaomeswa nechikafu, kana kwechikafu chakatangirwa-kupisa, tinogona kukupa mhinduro kwayo. Isu tinokwanisa kusangana neyakaomesesa chipingamupinyi zvivakwa zvepfuma yekudziya, mwenje, Oxygen nemhepo, hunyoro nehupfu.
Yedu chipingamupinyi mafirimu anosanganisira CPP, PET, EVOH, yakagadziriswa PP, foil, TOPP, VMPET. Kune zvakakosha zvinodiwa, senge zvoga kurongedza, isu tinopa super sealing uye thermoforming mafirimu. Yedu 7 dura Nylon / PE firimu anga ari mutungamiri wemutengo paEurope neAmerica kana chipingamupinyi mafirimu ari FDA anotenderwa.
Zvimiro uye sarudzo
Coex uye laminated chipingamupinyi mupumburu
Yakadzika density poly roll
Iyo Roll firimu yakatarwa dhizaini yemutsara wefekitori. Tinogona kutsika firimu base pane zvaunoda, inogona kunge iri aluminium foil, BOPA / NYLON firimu, ALOX firimu, SIOX firimu, Polyester, BOPP nezvimwewo, inogona kubva kune imwechete kusvika kune akati wandei matanda uye yapera neMat kana kupenya kutaridzika. .
Isu tinopa mhinduro kune yakasarudzika renji yezvipingamupinyi firimu kunyorera.Tiudze zvaunoda isu tinosangana ako ese marudzi ezvido. Isu hatigadzirire zvigadzirwa uye toedza kukuchaira uchienda kwavari; isu tinoteerera kune zvaunoda uye mainjiniya matsva ayo anozogadzirisa ako ekupaka matambudziko.
Pashure: Tsika Yakadhindwa Plastiki Poly Firimu Roll
Zvadaro: Kutarisana nemask kurongedza kwepurasitiki mabhegi